Beka iscreensaver "molo" seMac entsha kuyo nayiphi na iMac neM1 | Ndisuka mac
Beka «molo» kwiscreen seMac entsha kuyo nayiphi na iMac neM1
I-M1 iMacs entsha iya kuthumela kunye nomkhuseli omtsha wesikrini kwi-macOS 11.3, ebizwa ngokuba ngumlo. Ukuhlonela okungathandabuzekiyo kwi-Macintosh yasekuqaleni kunye ne-iMac yasekuqaleni. Isigcini-sikrini esitsha siyafumaneka kwiMacOS 11.3 yokuKhutshwa koMgqatswa, kodwa inokuqhuba kuyo nayiphi na iMac ngokuthe ngqo. Sishiya indlela yokwenza lo msebenzi kuba ayifani nokuba ubeka iscreen semvelaphi. Sithetha ngomgcini wekhusi.
Ukusebenzisa isilondolozi sesikrini esitsha, okokuqala Kuya kufuneka usebenze kwiMacOS 11.3 yokuKhululwa. Ukusuka apho, ngumcimbi nje wokundwendwela le ndawo ilandelayo kwi-Finder: / Inkqubo / iThala lencwadi / iScreensaver / kunye nokukopa isibhengezo esikwi-hello kwidesktop yakho. Qamba ngokutsha hello.saver ku-hellocopy.saver kwaye ucofe kuyo kabini ukuyifaka.
Uya kucelwa ukuba uqinisekise ukufakwa kunye negama lokugqitha lomlawuli. Nje ukuba iqinisekisiwe, isigcini-skrini siya kufakwa kwaye sifumaneke kuKhetho lweNkqubo → Idesktop kunye nescreen seScreen → Umgcini wekhusi. Nceda uqaphele ukuba hello screen protector Ifuna iMacOS 11.3Ke ukuba uzama ukuyifaka kuhlobo oludala lwe-macOS, uya kudibana nempazamo echaza ukuba uhlobo oluthile luyafuneka.
Khetha u-Hello screensaver kwaye ucofe u-preview ukuze ubone umbono wenyani. Eyona nto ipholileyo kukuba isikrini sineempawu ezahlukeneyo iinketho ezinokuqwalaselwa ukulungisa imeko.
Umkhuseli wescreen ubandakanya iindlela ezintathu ezahlukeneyo:
UmxholoImixholo emithathu eyahlukeneyo. Iithoni ezithambileyo, iSpectrum kunye nokuncinci. Imibala inemibala efanayo naleya uza kuyibona kwi-iMac entsha, kubandakanya iorenji, luhlaza okwesibhakabhaka, tyheli, nepinki.
Iilwimi: Ngokuzenzekelayo, umgcini-skrini uboniswa kwiilwimi ezininzi, ezinje ngesiJapan, isiCroatia kunye neSpanish, kodwa abasebenzisi banokhetho lokungakhangeli uMboniso "molo" kuzo zonke iilwimi ukuze iscreensaver siboniswe ngesiNgesi kuphela.
Inkqubo yokubonakala: Ukuba ufuna u-Sawubona ugcino lwescreen ukuze utshatise inkangeleko yenkqubo ngokwendlela yokukhanya okanye emnyama, shiya nje inkqubo ehambelana nenketho yokubonakala enikwe amandla. Ukwenza njalo kuya kubangela ukuba ugcino lomnyama luvele xa imowudi emnyama yenziwe kwi-Mac yakho
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Beka «molo» kwiscreen seMac entsha kuyo nayiphi na iMac neM1